Hulu မူရင်း 'Pure' သည်နောက်တွဲယာဉ်အသစ်များရရှိပြီးမဲန္နနိုက်များသည်ဆိုးဝါးနေကြောင်းပြသနေသည် - Netflix သတင်း
Hulu မူရင်း 'Pure' သည်နောက်တွဲယာဉ်အသစ်များအားမဲန္နနိုက်များပြတ်တောက်နေမှုကိုပြသနေသည်
အဘယ်ကြောင့် Hulu southpark ဖယ်ရှားပစ်ရခဲ့ပါ
AMC: 'ရပ်တန့်ပြီးမီးသတ်' သည်နောက်ဆုံးရာသီပြသထားသောရက်စွဲနှင့်ကြိုတင်ကြည့်ရှုခြင်းခံရသည် GLOW သည်ပုပ်ထားသောခရမ်းချဉ်သီးများပေါ်တွင်လတ်ဆတ်သောအသိအမှတ်ပြုထားခြင်းဖြစ်သည်
Hulu မှနောက်ဆုံးကြိုးပမ်းမှုဖြစ်သော Pure သည်အပြင်လူအနည်းငယ်မှောင်မိုက်သည့်ဘက်ရှိလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ထားသည့်လူစုလူဝေး၏အမှောင်ဘက်ကိုပြသသည်ဟုဆိုပါသည်။
AND အွန်လိုင်း အဘယ်အရာအတွက်အသစ်စက်စက်ဗွီဒီယိုတစ်ခုထွက်ပေါ်လာသည်ကိုပြသခဲ့သည် စင်ကြယ်သော , Mennonite အဖြစ်ဖော်ပြထားပြီးကြောင်းပြပွဲ ဆိုးဝါးစွာချိုးဖောက်ခြင်း ။ ဤလာမည့် Hulu မူရင်းသည်ပconflictိပက္ခဖြစ်နေသောသင်းအုပ်ဆရာတစ် ဦး ၏အသိုင်းအ ၀ ိုင်းကိုအမြဲတမ်းကျုံ့နေအောင်လုပ်ရန်ကြိုးစားနေခြင်းအကြောင်းဖြစ်သည်။
ဒီပြပွဲကိုကနေဒါမှာဖန်တီးနေပြီးဖြစ်ရပ်မှန်တွေပေါ်အခြေခံထားတယ်။ ဦး ဆောင်သူမှာအသစ်ရွေးချယ်သောသင်းအုပ်ဆရာဖြစ်သည်။ သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုဟောပြောနေစဉ် Funk (Ryan Robbins မှ) မြှား ) သည် Mennonite မူးယစ်ဆေးဝါးလက်ဝယ်တွင်လျှို့ဝှက်ထောက်လှမ်းရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်နေသည်။
The Dark season3ဖြန့်ချိသည့်နေ့ရက်သတ္တပတ်များအတွင်း - ရာသီသစ်တစ်ခုရှိမည်လား။ ဘယ်တော့ထွက်လာမှာလဲ
Walt နဲ့မတူတာက ဆိုးဝါးစွာချိုးဖောက်ခြင်း , စင်ကြယ်သော နော။ သည်သူနေထိုင်ရာဒေသရှိမူးယစ်ဆေးဝါးကုန်ကူးမှုမှလွတ်မြောက်ရန်ဖြောင့်မတ်သောလမ်းကိုလျှောက်ရန်ကြိုးစားသည်။ လူဆိုးတွေဟာမက္ကဆီကိုကနေလာပြီး Funk တွေကိုချစ်မြတ်နိုးတယ်။
မူရင်းပရိုဂရမ်နှင့်ပတ်သက်လာလျှင်ဟလူလူအရောအနှောရောနှောတုံ့ပြန်မှုအနည်းငယ်ရှိသော်လည်း၎င်းသည်တသမတ်တည်းအနိုင်ရပုံသေနည်းကိုရှာဖွေရန်နီးကပ်လာပုံရသည်။ လမ်းကြောင်း တစ် ဦး ပရိသတ်ကိုရှာဖွေနိုင်ခဲ့သည်။ စင်ကြယ်သော အဆုံးအားဖြင့်ကျန်ကြွင်းသောချိုးသို့ခုန်သောပြပွဲမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ် ဆိုးဝါးစွာချိုးဖောက်ခြင်း ။
စင်ကြယ်သော လာမည့်လတွင်ရောက်ရှိလိမ့်မည်နှင့် Hulu ကကြိုးဖြတ်တောက်ရန်ကြိုးစားသူများအတွက်ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်စေသည့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်အတွက်နောက်ထပ်တိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်နေသည်။ စင်စစ်အားဖြင့် streaming ၀ န်ဆောင်မှုသည် Netflix နှင့် Amazon တို့တွင်တိုက်ရိုက်ပြိုင်ဘက်များထက်အချက်တစ်ချက်ပိုထွက်နေသည်။
စင်ကြယ်သော ဇူလိုင်လ ၇ ရက်နေ့တွင်နောက်ဆုံးပေါ် Hulu မူရင်းအဖြစ်ရောက်ရှိလာပြီး Peter Outerbridge (Orphan Black)၊ Rosie Perez တို့ကို DEA အေးဂျင့် Phoebe O'Reilly နှင့် A.J. အဖြစ်သရုပ်ဆောင်သည်။ Buckley (တရားမျှတ) ။
သင်စောင့်ကြည့်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ် စင်ကြယ်သော Hulu ကိုရောက်ရင် ကျွန်တော်တို့ကိုအောက်ပါမှတ်ချက်များအတွက်သိပါစေ!
Quantico ရာသီ2Hulu လွှတ်ပေးရန်နေ့စွဲ
ဘယ်အချိန်မှာပိုကောင်းခေါ်ဆို saul ရာသီ4ခေါ် netflix သို့လာပါဘူး
ကိုယ့်အနေဖြင့်ပြပွဲ Netflix အပေါ်စာရင်းထဲမှာဆက်လက်ကြည့်ရှုပုံကိုဖယ်ရှားပစ်ကြဘူး
မွေးမြူရေးခြံရာသီ7ဇာတ်လမ်းတွဲ 8